Inona no atao hoe aloe vera? Inona avy ireo fananany? Jereo eto! | Nutri Diet
PaÃ¼ Heidemeyer | | soso-kevitra, aretina
Fantatrao ve ny atao hoe aloe vera? aloesy dia karazan-javamaniry manana solontena malaza indrindra ny aloe vera. Izy io dia karazana sarobidy indrindra noho ny sanda ara-pahasalamana avo lenta, ny vokany mamelombelona ary ny heriny manasitrana amin'ny sunburn. Avy any Afrika izy io na dia ankehitriny aza dia hita amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Zavamaniry fanao mahazatra ao an-tranon'ny olona maro izy io, na dia efa natoronay aza ny toetrany lehibe dia ny fitsaboana, mihoatra ny sandan'ny haingo.
De loko maitso mazavaZavamaniry tena nofo izy io izay mitahiry rano be ao anatiny. Ity ranoka anaty ity dia amin'ny endrika gel mavo ary amin'ny ampahany dia manana hery manasitrana bebe kokoa; ny sasany amin'izy ireo dia voarakitra an-tsoratra ary ny sasany izay anisan'ny kolontsaina malaza.
Tamin'ny andro taloha dia nampiasana azy io tamin'ny alàlan'ny fanapahana mivantana ny ravin'ny zavamaniry. Amin'izao fotoana izao, azonao atao koa ny mampiditra azy amin'ny endrika gel, takelaka, kapsily, menaka ary tonika, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny fivarotam-panafody, mpivarotra raokandro ary fivarotana sakafo voajanahary.
1 Ny zavamaniry aloe
2 Tombontsoa ho an'ny Aloe Vera
3 Lahatsary Aloe Vera
4 Aloe Vera fananana
5 Aloe Vera ho an'ny volo
6 Aiza no hividianana aloe
7 Aloe vera sy ny fananany
Ny zavamaniry aloe
Amin'ity fotoana ity dia hanazava isika inona ny aloe raha tsy mbola fantatrao ity zavamaniry mahafinaritra ity.
Ny zavamaniry Aloe dia kirihitra misy fotony fohy rakotra ravina, ny fotony dia mahatratra 30 santimetatra ny haavony. Ny raviny dia mety hahatratra 50 santimetatra ny halavany ary 8 santimetatra ny sakany. Matetika izy ireo dia hita any amin'ny faritra feno fasika sy eo amoron'ny morontsiraka, amin'ny haavon'ny ranomasina hatramin'ny 200 metatra ny haavony.
Avy any Arabia izy io ary tompon'ireo faritra subtropika sy antonony amin'ireo hemispera roa, tafiditra ao ny Mediterane.
Izy io dia ambolena matetika amin'ny maha-zavamaniry haingon-trano azy, na izany aza, ny fananana fanafody sy ny hatsarany dia manome laza azy bebe kokoa. Amin'ny toerana sasany dia fantatra amin'ny hoe Aloe vera na Aloe maculata.
Ankehitriny dia misy karazana Aloe mihoatra ny 250, izay tsy misy afa-tsy ny telo no manana ny toetran'ny mahasitrana na ny fitsaboana. Ampiasaina bebe kokoa amin'ny kosmetika izy io, ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mamoaka ny pulp amin'ny fepetra tena vaovao. Ho fanampin'izay, azo ampiasaina hitsaboana azy io dermatitis, eczema, fanehoan-kevitra mahazaka.
Tombontsoa ho an'ny Aloe Vera
Fantatrao izao ny atao hoe aloe, andao hianarantsika ny tombony azo avy amin'ny fahasalamantsika. Aloe dia zavamaniry manana hery fitsaboana, tonga lafatra amin'ny fitsaboana aretina maro. Manaraka izany, lazainay aminao ny sasany tombony tsara indrindra fa tsy fantatrao angamba
Mety amin'ny fitsaboana diabeta izany, manana fananana mampihena ny kolesterola sy manatsara ny fivezivezena. Mifehy ny glucose ao amin'ny vatana.
Manatsara ny fandevonan-kanina ary mitsabo ny olan'ny rafitra fandevonan-kanina. Aloe Vera dia mampiroborobo ny fifohana otrikaina, manala poizina ary miasa ho toy ny fananganana indray ny flora-tsinay.
Antihistamitika tsara izy io ary manitatra ny bronchi.
Manana fananana manasitrana, manalefaka ary mamelombelona, noho io antony io dia tonga lafatra amin'ny tontolon'ny hatsaran-tarehy sy tarehy tarehy.
Mamono otrikaretina ny hoditra ary manala ny fanangonana sela maty. Mampihena ny may, manalefaka, mampitony ny fahasosorana ary mitsabo ny mony.
Tena manan-karena vitamina sy mineraly izy io izay manampy amin'ny fitazonana ny fiasan'ny vatana mety.
Mampihena ny tavy ao amin'ny vatana, misy asidra amine 22 izay 8 lafo amin'ny vatana. Manadio tena izy, manampy amin'ny fanafoanana ny tavy miangona amin'ny faritra sasany amin'ny vatana.
Izy io dia fanoherana voajanahary voajanahary, mampihena ny fitrandrahana ny asidra tompon'andraikitra amin'ny fivontosana. Azo sotroina mivantana na ampiharina mivantana amin'ilay faritra voadona. Izy io dia ampiasaina ho an'ireo izay mijaly amin'ny vanin-taolana, sprains, na osteoarthritis.
Soa azo avy amin'ny ranom-boaloboka
Lahatsary Aloe Vera
Ho an'ireo izay liana kokoa amin'ny fahalalana ny tombony aloe veraIty misy horonantsary misy famintinana tena mahaliana.
Aloe Vera fananana
Aloe Vera dia manana hery antiseptika izay manampy amin'ny famonoana otrikaretina ny hoditra ary mampiroborobo ny fanafoanana ireo sela maty, ity zavamaniry aloe ity dia iray amin'ireo malaza indrindra manerantany noho ny fananana mahasoa ho an'ny fahasalamana, ny hatsarana ary ny trano.
Misy vitamina be vitamina A, C, E ary B, mineraly ary asidra folika. Manaraka izany dia hampahafantarinay ny toetran'ny aloe izay izy io dia iray amin'ireo zavamaniry malaza indrindra.
Ahitana asidra glutamatika, aspartika, alanite, glycine, ankoatry ny hafa.
Mifehy ny glucose ao amin'ny vatana.
Izy io dia manome anzima betsaka, amylase, lipase, phosphatase, ankoatry ny hafa.
Manadio, manadio ary manome vahana ny fandevonan-kanina.
Mampitony, mampamando ary mamerina ny laoniny.
Heverina ho antiviral mahery izy io.
Mitsabo ny may.
Mampitony ny mangidihin'ny kaikitry ny bibikely.
Mamelombelona ny ce
Aloe Vera ho an'ny volo
Aloe Vera dia ampiharina amin'ny volo simba, frizzy, simba na maina loatra, mba hanomezana azy hery hamelomana azy hiverina amin'ny laoniny sy ny tanjaka.
Ny tsara indrindra dia ny mampiditra ny aloe mivantana amin'ny volon'ny zavamaniry voajanahary, na izany aza, raha tsy hitantsika ilay zavamaniry aloe ary tsy ananantsika an-trano izany alao antoka fa mividy gel ianao miaraka amin'ny aloe vera 95% anatiny.
Raha mampihatra azy amin'ny fomba mety indrindra dia mando ny volo, ao anatin'izany ny rano mafana ny tendrony, sorohy ny rano fa misy klôro no betsaka ao anaty rano. Avy eo, makà gel aloe vera manodidina ny 6 matavy ary apetaho moramora amin'ny loha sy ny sisa amin'ny volo. Manotra amin'ny faribolana ary aparitaho amin'ny tendrony daholo ny gel.
Atsofohy ny servieta ary fonosina mandritra ny 25 minitra ny volo, mba hiasa tsara kokoa ny gel. Sasao tsara amin'ny shampooing ary sasao amin'ny rano matimaty. Ity fizotrany ity dia mety raha hatao indroa isan-kerinandro.
Ny tombon-tsoa azo avy amin'ity fitsaboana ity dia tonga lafatra mba hisorohana ny fihenan'ny volo, ny hydrate ary ny famelomana ny volo. Ny fananana volo matavy dia miteraka tsy fahazoana aina be mandritra ny andro, noho izany ny fandrindrana ny famokarana sebum ny sela sebaceous dia iray amin'ireo fananany tsara indrindra. Famonoana fungisida sy bakteria tsara izy io.
Aiza no hividianana aloe
Androany ianao dia afaka mividy aloe vera na aloe vera amin'ny fivarotana lehibe rehetra, hita saika hatraiza hatraiza izy io. Indrindra raha vokatra kosmetika toy ny gel, shampoo na menaka izy ireo.
Ny tsara indrindra dia ny mividy ireo vokatra ireo amin'ny mpivarotra raokandro sy fivarotana vokatra biolojika, na amin'ny alàlan'ny Internet. Toy izany koa, tsy maintsy mampiasa ireo fomba ireo ianao hahazoana aloe vera ranom-boankazo vonona ho laniana.
Aloe vera sy ny fananany
Ho famaranana, dia ambaranay aminao fa tsy maninona ny fomba anononanao azy io aloe vera na aloe vera, mitovy ihany. Araka ny efa nolazainay, misy karazany maro amin'ny zavamaniry aloe, na izany aza, ny malaza indrindra ary ireo fantatsika rehetra dia ny aloe vera na aloe, izany hoe, vokatra mitovy.
Noho izany, dia fananana mitovy, tombontsoa ary ianao mividy amin'ny toerana mitovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Inona no atao hoe aloe vera?
tena mahaliana dia hoy izy:
tena nahaliana izy ireo nahazo 10
Valiny mahaliana be
Montserrat dia hoy izy:
Raim-pianakaviana 10 izy ireo fa tsy ray be 'super cool'
Valiny amin'i MONTSERRAT
voninkazo amandy dia hoy izy:
Eny, miaraka amin'ilay aloe, efa nianatra bebe kokoa aho, hanampy betsaka ahy izany
Mamaly voninkazo amandy
Reny fa ny aloe nalaina am-bava manampy anao hampihena? Sa mandoro kaloria?
ahh voalavo voaozona ianao, biby mandady be mihintsy
astrid carolina dia hoy izy:
ny aloe dia zavatra marefo be sns
Mamaly an'i astrid carolina
Tena bnbnbn nanompo ahy be dia be
Angamba manana marika 10 aho
Fa mbola bnbn io
Tena bnbnbn ity 10 !!!!
aloe dia tena tsara ho an'ny tasy
Mamaly an'i jesuss
akanjo dia hoy izy:
misaotra mahaliana tamin'ny fandefasako fa nilaiko izy :)
Valiny amin'ny akanjo
Lahatsoratra tena tsara, tena mahaliana, misaotra.
josmarvis dia hoy izy:
Tena zava-dehibe ny Aloe Vera satria indray andro any dia azontsika atao ny mampiasa azy io ho fanafody amin'ny aretina mety ho azontsika
Mamaly an'i josmarvis
Chat Free dia hoy izy:
Nilaza izy ireo fa ny aloe vera dia manampy amin'ny ady amin'ny homamiadana mihitsy.
Valiny amin'ny Chat Free
Bella dia hoy izy:
Fantatrao ve fa: ny aloe dia famenony voajanahary ary manampy amin'ny fanasitranana aretina toy ny bronchopneumonia
Mamaly an'i bella
MAFE dia hoy izy:
Nanompo ahy noho ny fanamarinana ara-tsiansa i MUII BN
TSY nila nanao EXHIBIT II aho dia hitako AKI Q CHEBRE
Valio amin'i MAFE
Marfer_74 dia hoy izy:
Tiako ho fantatra ny fomba fampiasana azy mba hampitomboana ny volo haingana ampiana tongolo. MISAOTRA ANAO
Mamaly an'i Marfer_74
Toa nahaliana sy nilaina tokoa io lohahevitra io ho an'ny tanora rehetra
mariangeles gutierrez lucena dia hoy izy:
Misaotra ilay aloe nanao ny fitsaboana ahy aho ary ankehitriny dia nihena bebe kokoa noho ny hatramin'izay
Valio i mariangeles gutierrez lucena
Luceny126@hotmail.com dia hoy izy:
aloe tena tsara
Mamaly an'i Luceny126@hotmail.con
fotsy dia hoy izy:
ary ny aloe dia tsara amin'ny volo maniry ????? tsy misy ambara !!!
Mamaly an'i Blan
lehibe dia hoy izy:
raha nanandrana tamin'ny ratra aho ary nanao zavatra lavorary ... dia manala ny sicatriz aza
Mamaly amin'ny lehibe
Emanuel_araceli_2013 dia hoy izy:
Misaotra ny zava-drehetra. Hodinihiko ilay zavamaniry aloe vera ... tsara hoy izy ireo….
Valiny tamin'i Emanuel_araceli_2013
zharick dia hoy izy:
io zavamaniry io dia ampiasaina amin'ny volo
Mamaly an'i zharick
Tena tsara fa tsy misy fampahalalana, tsy mieritreritra tsara ianao, arahaba
Angelica Granados dia hoy izy:
Misaotra ny aloe tsara tarehy ny voloko
Mamaly an'i angelica granados
LBULMARA LOPEZ dia hoy izy:
Salama maraina, raha ny marina dia raisiko izany, efa ela aho no nanana finoana betsaka ny aloe vera, ireo fananana mahatalanjona an'io zavamaniry io dia manampy ahy betsaka amin'ny fanaintainan'ny fiaraha-mientana, manoro hevitra azy ireo aho!
Valio amin'i lBULMARA LOPEZ
natao ho an'ny tarehy izany
Andrahoy amin'ny rantsan-tongotra sy cacara ary tantely ny savila. Manasitrana pnemonia
Tiako ny bilaoginao, hitako fa mahaliana satria manampy antsika hanasitrana sunburn izy io.
Cristian Zapata dia hoy izy:
misaotra manampy betsaka
Mamaly an'i zapata cristian
estefanybelmonte dia hoy izy:
misaotra dia tena ilaina tokoa
Mamaly an'i estefanybelmonte
tena tsara ity pejy ity
jhampool dia hoy izy:
tsy maninona fa aloe
Mamaly an'i jhampool
aloe tsara ampiasana azy io hivezivezena miaraka amin'ny gel ... tena tsara
simon alfred dia hoy izy:
sabile dia fanafody tsara
Mamaly an'i simon alfredo
Zavamaniry izay hanatsara ny fitadidianao